Taliyihii Hore ee NISA: Tuuryare oo shaaciyey xog xasaasi ah oo ku saabsan gudiga doorashada Galmudug | Dayniile.com
Home Warkii Taliyihii Hore ee NISA: Tuuryare oo shaaciyey xog xasaasi ah oo ku...
Taliyihii Hore ee NISA: Tuuryare oo shaaciyey xog xasaasi ah oo ku saabsan gudiga doorashada Galmudug
Jeneraal Cabdiraxmaan Tuuryare oo si adag uga hadlay kursiga beeshiisa ee loo boobay Taliyaha NISA Yaasiin Farey ayaa sheegay in dalkaan aysan doorasho ka socon, isagoo tilmaamay in guddiga doorashooyinka ay maamusho NISA, sida uu hadalka u dhigay.
Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa sheegay in dadka ka soo jeeda beesha Waceysle si joogto ah loogu hanjabo, “Hadii ay wax gaaraan qof ka mid ah beesha, waxaan u heysanaa sarkaalka wax loo boobay hey’adda uu ka tirsan yahay iyo Villa Somalia,” ayuu yiri Tuuryare.
Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa sheegay inay dacwad u gudbiyeen guddiga doorashooyinka, balse ay kala kulmeen waji gabax, isagoo madaxda guddiga doorashooyinka ku sifeeyey xubno ka amar qaata taliska NISA.
“Umadda Soomaaliyeed waxaan u sheegeynaa doorasho ha ku aaminina guddigaas, anagaa soo xaqiijinay, anagoo la joogna ayaa la soo wacayey, ninka ugu sareeya guddigaasna waxaa noo cadaatay inuu ka amar qaato taliska NISA,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Cabdiraxmaan Tuuryare.
Jeneraal Tuuryare oo hadalkaan ka jeediyey kulan waxgaradka beesha Waceysle ay ku yeesheen Muqdisho ayaa hoggaanka beesha ku booriyey in aysan is dhiibin oo aysan ogolaan in xaqooda la duudsiiyo.
Previous articleGudoomiyaha Guddiga Doorashada Soomaaliya “Cabashooyin badan oo Doorashada la xiriira ayaa nasoo gaaray”.
Next articleUS threatens escalation with Iran in nuclear row
The death toll from the strongest typhoon to hit the Philippines this year has risen to 18 as the disaster agency warned Saturday of...
Wasaaradda haweenka Galmudug oo daahfurtay ololaha 16ka maalmood ee wacyi galinta...